Tacsi : Maamulka iyo Shaqaalaha Shabakada Warsheekh oo tacsi udirayay Dadkii ku geeriyooday Bada Liibiya.
Wednesday July 30, 2008 - 20:57:19 in Tacsi by Xarunta Dhexe
Maamulka, Shaqaalaha iyo Aqristayaasha Shabakada Warsheekh waxa ay Dhambaal Tacsi ah hawada umarinayaan dhamaan ehelka iyo Qaraabadi ay ka geeriyoodeen Dadki ku maashoobay Doonidii ku qalibmatay Bada Liibiya.
Sidoo kale Waxa Tacsi Gaar ah hawada loo marinayaa Dadka kala ah
Hooyo Faadumo Xuseen
C/fitaax Sheekh C/llaahi
C/casiis Sheekh C/llaahi
Yuusuf Sheekh C/llaahi
iyo Dhamaan Reer Sheekh C/laahi Xaamud meel kasta ay Joogaan Geeridi ku timid Allaah Unaxariistee Axmed Qadar Sheekh C/llaahi Xaamud oo ku geeriyooday Dalka Liibiya iyadoo alle looga baryay in uu janadii Fardowso ka waraabiyo iyagana samir iyo iimaan uu kasiiyo aamiin .
Sidoo kale waxa Tacsi tan la mid ah loo Dirayaa
Aabe C/qaadir Cabdi Ibraahim (Moobleen)
Marwaan C/qaadir Cabdi Ibraahim
Axmed C/qaadir Cabdi Ibraahim
iyo ilmo C/Qaadir Cabdi Ibraahim meel kasta oo ay joogaan iyadoo looga tacsiyeenaayo Allaah Unaxariistee Geeridi ku timid Mahdi C/qaadir Cabdi Ibraahim oo ku geeriyooday Xeebaha Dalka Liibiya waxana alla looga Baryayaa in uu janadii Fardowso eheed ka waraaabiyo iyagana samir iyo Iimaan oo ku siiyo .
Inaa lilaah Wa Inaa ileehi Raajicuun.